Salaamanews » Xujeyda caalamul-islaam oo taagan banka carafo
Home » Islam, Warar Xujeyda caalamul-islaam oo taagan banka carafo Print - Daabace: SalaamaNews - Oct 25th, 2012 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Daawo: Dhibaatooyinka heysta dhallinyarada IslaamkaKooxda Al-shabaab oo ku hanjabtay inay dili doonto hogaamiye mareykan ah oo la safanWadamada Islaamka oo ku baaqay qorshe lagu taageerayo SoomaaliyaShir diimeed Tansaaniya ka mamnuucay hadallada nacaybka diimaha dhaliyaWaraaq furan oo ku socota al-Zawahiri oo gilgishay aasaaska al-Shabaab
(Salaamanews)-Maanta waa maalin weyn oo taariikhda islaamka macna ugu fadhisa dhamaan muslimiintana waxay xubnahoodu u jaheysan yihiin cibaadada allah, dhamaan dadka islaamka ah ayaa u qeybsan kuwa taagan banka carafat iyo kuwa sooman oo maalinta sagaalaadka weyneyn iyo qadarin u haya.
Xujeyda Sanadkan ayaa waxaa ku jira Soomaali badan oo ka kala timid gudaha Soomaaliya iyo dalalka kale ay ku nool yihiin,waxaana laga dheehan karaa shucuurta ay muujinayaan inay isku diyaariyeen cibaadada allah.
Dhamaan xujeyda ayaa saaka ka soo huleelay Mina, oo xalay ay ku hoydeen, waxaana ay u dareereen Banka Caraf si ay u gutaan waajibaadka ugu muhiimsan ee Acmaasha Xajka, oo hadii uu ku dhaafo acmaashaada xajka ay noqoneyso mid aan ansixin.
Boqortooyada Sacuudiga ayaa sanadkan adeegyo cusub ku soo kordhisay Xajka, iyadoo meel walba la dhigay gawaarida gurmadka deg dega, sidoo kale meel walba oo 1-KM ah waxaa laga sameeyay goobo caafimaad, si qofkii xanuun dareema loogu daaweeyo.
Kumanaan isugu jira Boolis iyo Ciidamada Taraafikada ayaa kala hagaya xujeyda, waxaana meelaha qaar ku diyaarsan baabuurta qaada dadka waayeelada soo gaarto, sidoo kale waxaa jira gawaari lagu diyaariyay raashin iyo cabitaano meel walba yaala.
Shiikh Maxamed C/naasir oo kamid ah bulsha weynta Soomaaliyeed ee gudanaya wajibaadka xajika ayaa taleefanka iigu waramay wuxuuna sheegay inay ku rjaa weynyihiin inay gutaan mid kamid ah waajibaadka ugu muhiimsan ee eebbe uu saaray muslimiinta oo dhan cidii awoodda.
Mar aan taleefanka kula hadlay ayaa jawiga goobta uu ku sugnaa waxaa ka maqlay dhawaqan “Labeyka laahuma labeyk… “ waxaana la dareemi karay sida xujeyda caalamul islaami u gudanayaan waajibka eebbe.
Mar aan weydiiyay halka ay joogaan ayuu igu yiri “Waxaan gudaneynaa Xajka oo waxaan taaganahay banka carafe, qofkii uu dhaafo sanadkan sooma celin karo waa inuu sugaa sanadka kan xiga, dad badan oo malaayiin ah ayaa xajinaya soomaali badan ayaa kamid ah xujeyda” ayuu yiri Shiikha.
Shiikh Maxamuud oow Cabdulle Cariif oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa qeexay qiimaha uu leeyahay xajka waxaana uu xusay in xajku uu yahay mid kamid ah arkaanata islaamka, waxaana uu shegay rukniga shanaad ee islaamka inuu yahay xajka lagana rabo qofkii eebbe uu u suurrta galiyo.
Jimcaha birrito ah ayaa ah Ciidul Adxa ee Xoola Qalka waa maalin ay si aad ah ugu faraxsan yihiin Muslimiinta Caalamka meel waliba oo ay aduunyadu ka joogaan, maanta oo ah Sagaalka Carafo ayaa ah maalintii la dhameystiray Soo Degista Qur’aanka Kariimka waana maalin ahmiyad gaar ah u leh Muslimiinta Dunida meel waliba oo ay joogaan.
Tags: islam, warar « Qoraalkii HoreAMISOM assists Somali Police Force in vetting ex-police officers	Qoraalka Xiga »Uganda fury at Congo claims: Somalia operation reviewed	Halkan Hoose ku Jawaab